Otu esi eme ụlọ polymer ụrọ | Crafts Na
Otu esi eme ulo polymer nke ulo
Irene Gil | | Crafts na ihe
Ọtụtụ mgbe m bulite posts raara nye polima ụrọ, a na-akpụzi ya ma nwee ike iji ya mee ihe na-enweghị atụ Oru. Abụọ iji mee ihe oyiyi, iji mepụta agbụ ma ọ bụ ọla. Ọ bụ ihe m hụrụ n'anya ma ọ dịkwa ezigbo ụtọ ịrụ ọrụ.
Naanị azụghachi bụ ego ebe ọ bụ na ọ bụghị oke ọnụ, mana ọ dị oke ọnụ agaghị ezu ya ma ọ bụrụ na anyị ejighị n'aka ihe anyị ga-eji ya ma ọ bụ na anyị ga-ama otu esi enye ya ezigbo ojiji. Maka nke ahụ, na taa post m bulite uzommeputa iji mee arụrụ n'ụlọ polymer na ka i wee nwalee ma jiri ihe egwuri egwu n'uzo di onu ala
La polima ụrọ, makwaara dị ka Fimo, bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'ụwa a nke okike na echiche efu. Ekele ya anyị nwere ike ịmepụta ụdị niile na-egosi n'uche anyị yana nsonaazụ dị egwu. Chọpụta ihe niile ịchọrọ gbasara ya!
1 Gịnị bụ polymer ụrọ?
2 Akụrụngwa maka ịme ụrọ polymer
3 Otu esi eme ulo polymer nke ulo
4 Kedu ka esi eji polymer ụrọ?
5 Ebee ka ịzụta polymer ụrọ?
6 Dị kachasị amara nke ụrọ polymer
7 Crafts na polima ụrọ
Gịnị bụ polymer ụrọ?
Ebe ọ bụ na anyị gosipụtara ya ngwaahịa nke kpakpando, ugbu a anyị ga-amata nke ọma ihe anyị na-ekwu. Polima ụrọ bụ a moldable mado. O doro anya na anyị niile na-echeta egwuregwu anyị ji mee ihe mgbe anyị dị obere. Ọfọn, ọ dị nnọọ ka nke a. Enwere ike iji ya mee ihe na ndị na-eto eto na ndị na-eto eto, ebe ọ bụ na ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma ọ dịghị achọ ụdị nsogbu ọ bụla.
Naanị ihe dị iche na anyị nwere ike ịhụ na plasticine bụ na ụrọ a nwere ike ikpokọta agba. Ọ bụrụ n ’agwakọta agba abụọ, ị ga - enweta nsonaazụ mabul nke mbụ ma ọ bụrụ na ị gbatịkwuo oge a gwakọtara ọnụ, mgbe ahụ ị ga - enweta ngwakọta homogeneous.
3 Echiche iji mepụta ndị na-acha odo odo
Akụrụngwa maka ịme ụrọ polymer
1 ite teflon.
1 iko nke ụlọ akwụkwọ ọcha (zụta ebe a).
1 iko nke ọka.
2 okpokoro mmanụ ịnweta.
1 tablespoon nke lemon.
Ntụ ntụ nke agba di iche iche. (zụta ebe a)
Anyị ga-agwakọta ihe niile dị na ite Teflon tinye ikpo n’ọkụ n’ọkụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka mgwakota agwa nwee agba, anyị ga-etinye ntụ ntụ ntụ nke agba achọrọ na ihe ndị ahụ, ma ọ bụghị, mgwakota agwa ga-acha ọcha.
Ozugbo anyị nwere ihe ndị dị na ite Teflon, ndị anyị ga-agwakọta maka nkeji iri na obere ọkụ ruo mgbe mgwakota agwa ga-anọgide. Mgbe ahụ, wepụ ya na ọkụ wee mee ka ọ dị jụụ. Ghichaa ya ruo mgbe ọ dị mma ma dị mma. N'ikpeazụ, iji chebe ya ịkwesịrị ịdebe ya n'ime ite ikuku.
Na foto dị n’elu ị nwere ike ịhụ iberibe ejiri ya polima ụrọ na unu puru ime onwe unu.
Kedu ka esi eji polymer ụrọ?
Ugbu a anyị matara na ọ bụ pasta a pụrụ ịkpụzi, anyị ga-emezue ozi na-akọwapụta otu esi eji ma ọ bụ mee ụrọ a. Nke mbu, anyi kwesiri ido ya. Iji mee nke a, ị ga-eche maka ọnụ ọgụgụ na ị ga-eji aka gị kpụzie. Site na ikpo ọkụ nke ndị a, ọ ga-adị mfe ma dịrị mfe ijikwa ụrọ. Ozugbo inwere onu ogugu e kere eke, i gha ewere ya n’ime oku. Ee, ị ga-ahapụ ya na igwe eji eji ọkụ maka nkeji ole na ole. Na arịa ọ bụla nke ụrọ, ha ga-egosi oge ị kwesịrị ịhapụ ya mana dịka iwu n'ozuzu ọ na-abụkarị ihe dịka 15 nkeji, ihe dị ka. Mgbe anyị na-ewepụ ya n’ọkụ, anyị ga-ajụ oyi ma si ebe a, ị nwere ike bepụ ya ma ọ bụ tee ọnụ ọgụgụ ahụ ị mere. Dị mfe dị ka nke ahụ!.
Ebee ka ịzụta polymer ụrọ?
Ebe mbụ anyị kwesịrị ịga nwee ike ịzụta polymer ụrọ, bụ ụlọ ahịa agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ nka. Ekwesịrị ikwu na, ọ bụ ezie na ọ bụ ngwaahịa a maara nke ọma, ọ gaghị enwe otu na ebe ndị a niile. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya maka anyị, mana anyị ga-enwe ịntanetị. Enwere ọtụtụ peeji, yana ọrụ aka ebe ị nwere ike ịchọta ha. Justkwesịrị ịchọ ndị na-enweghị ọtụtụ ụgwọ ụgbọ mmiri n'ihi na anyị achọghị ka ọnụahịa ikpeazụ ga-arịgo karịa ka ọ dị mkpa.
Otu esi eme ka ọla ntị na-acha ọcha na uda ọla edo zoo site na nkwụsị
Dị kachasị amara nke ụrọ polymer
Dị ka anyị kwuru na mbido, ihe a na-akpọ Fimo. Ọ bụ ezie na a ga-echeta ya na Fimo bụ aha otu ụdị ụrọ ma ọ bụghị aha njirimara. Ọfọn, malite na ntọala a, ị maara na n'okpuru aha a ị nwere ike ịchọta ụrọ na Spain. Ga-enwe ụdị abụọ dị n'ime ya:
Fimo Omuma: O siri ike ịkpụzi, mana ọ na-adịgide adịgide.
Fimo Nro: Ọ dịla njikere iji ya. Ma n'ezie, ọ bụ a bit ọzọ siri na a pụrụ-agbaji n'ụzọ dị mfe.
N'aka nke ọzọ, ị ga-ahụkwa akara ahụ Sculpey na Kato. Yabụ, ị gakwaghị enwe ngọpụ iji nwee ike iso gị rụọ ọrụ.
Ọ bụ ihe amamihe na-amalite na obere na mfe ọgụgụ ma n'ezie, ị ga-adịghị anya palitere gị pụrụ ichetụ n'echiche na-ahụ otú nkà vein-abịa na a okwu nke sekọnd. Anyị a ga-agbada ala ịrụ ọrụ?
Crafts na polima ụrọ
Ọtụtụ ndị na-eche na polima ụrọ Nwere ike ịme ọnụ ọgụgụ naanị, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe kachasị amasị gị, ụdị ụrọ a na-enye ọtụtụ ohere ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịme ọnụ ọgụgụ na ibido, ọ nwere ike ịdịrị gị mfe ịmalite mfe bebi na obere nkọwa. Na ịntanetị ị ga-ahụ ọtụtụ "nzọụkwụ" na foto nke ha na - akuziri gị ka ị na - eme akụkụ ọ bụla nke ọnụ ọgụgụ ahụ.
Fọdụ onu ogugu enwere ugbua nke emeputara di mfe ma dikwa nma, ha bu nri kawaii. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịgbakwunye otu igodo, tinye ha dị ka ọla ntị, olu ma ọ bụ ịchọ mma maka pensụl ma ọ bụ pen.
Ọzọkwa ị nwere ike ịmepụta okooko osisi na osisi pIji icho mma. Ihe ọ rụpụtara dị ezigbo mma. Nyere onwe gi aka na ndi na egbutu ya na ngwa oru gha enyere gi aka imeputa ihe kari. Otu nkọwa, ị nwekwara ike iji achịcha achịcha, ebe ọ bụ na ụtọ ma ọ bụ kuki bụ otu ihe ahụ na ụrọ.
Ga-ahụ na obere omume ị nwedịrị ike ịme okooko osisi dị mma.
Dị ka m na-ama kwuru, ị na-adịghị na-eme ka naanị ọgụgụ, na ụgbọ mmiri mmas bụ ezigbo ihe ọzọ. Have nwere ọtụtụ puku echiche ga-akpali gị icho mma na egweri ndị iko ite na ị na-eji kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eji ụrọ mmiri polymeric eme ihe, ị gaghị enwe nsogbu itinye dum iberibe na oven, iko ahụ ga-ejide ya n’ụzọ zuru oke. Kpachara anya, ejirila ite plastik mee ihe na ọrụ gị ga-akwụsị nke ukwuu.
Na mgbakwunye na nke a niile, enwere usoro ịchọ mma a maara nke ọma na ụwa nke ụrọ polymer a na-akpọ "millefiori" ma ọ bụ na Spanish "puku okooko osisi". Gosiri na ijikọta iberibe ụrọ polymer ọnụ iji mee ọkpọkọ a na-egbutu ya na mpekere ma gosiputa eserese nke imere, ma obu ma obu nke puru iche. Na mbido, e kere okooko osisi, mana ọ malitere ma ugbu a ị nwere ike ịchọta ihe niile.
Enwere m olileanya na ị ga-ahụ na ọ bara uru na ruo oge ọzọ DIY.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts na ihe » Otu esi eme ulo polymer nke ulo
Edemede dị ezigbo mma, daalụ maka ịkekọrịta ya, ị maghị ụzọ ahụ iji nwee ike iji ụrọ polymer n'onwe gị, ugbu a bụ oge itinye ya n'ọrụ.
Ndewo, gbaghara ajụjụ bụ powder tempera? M bi na Mexico na ejighi m n'aka ma ọ bụrụ na m ghọtara gị nke ọma, ọ bụrụ na ị na-ekwu tempera ị pụtara ntụ ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ọ bụ, ọ ga-abụ akwụkwọ nri ma ọ bụ olee otu?
Ndewo, achọrọ m ịma ma ị nwere ike dochie mmanụ ịnweta na mmanụ nkịtị ma ọ bụ mmanụ ọzọ?
Ndewo, ajụjụ abụọ
1. Gịnị bụ ntụ ntụ ntụ? O nwere ike ibu aniline? Na m na-eji maka oyi poselin na ọ fọrọ nke nta ahụ Efrata
2. Ọkụ ahụ ọ bụ iwu na / ma ọ bụ na microwave na-arụ ọrụ?
Ekwula na nke a bụ ụrọ polymer, ị na-eme mado ụlọ, pasta oyi ma ọ bụ French poselin, emela ka ndị mmadụ daba na njehie ahụ, ụrọ polymer agaghị ekwe omume ịme na kichin n'ihi na ọ na-ewe usoro kemịkal dị mgbagwoju anya na nkọwa ya.
Zaghachi Bianca Scheiber
Biko mezie post gị, nke a abụghị polymer ụrọ, nke a bụ ụdị poselin emere n'ụlọ. Polymer ụrọ chọrọ usoro kemịkal dị mgbagwoju anya, dị ka aha ya si dị, ọ bụ polymer ma ọ bụ pvc plastic nke chọrọ ụlọ nyocha zuru oke ma kwadebere iji mee ya. Emela ka ndị mmadụ nwee mgbagwoju anya, abụ m onye na-akpụ ụrọ polymer na nke a bụ ihe ọ bụla mana m na-arụ ọrụ.
Emegbula mmadu !!!
Ihe ị na-ekwu B NOTGH poly polymer ụrọ.
Polymeric bụ pasta nke dabere na PVC, polymer plastic nke nwere ọtụtụ ụmụ irighiri ihe (monomers) nke vinyl chloride. Usoro vinyl chloride polymerization bụ ihe na-egbu egbu nke ukwuu ma na-ewere ọnọdụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emechi ihe na-ekpo ọkụ.
Ndewo, ehihie ọma, oven bụ iwu maka ụdị ọrụ a?, Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu !!!
Ekwenyere m, nke a abụghị ụrọ polymer, ọ bụ poselin emebere ụlọ. N'agbanyeghị ole gwọọ ya na oven, hapụ ya kpọrọ nkụ, ọ bụrụ na mpempe akwụkwọ ahụ mikpuru n'ime mmiri, ọ na-agwụ na-agbaze, nke na-anaghị eme na ezigbo polymer ụrọ, nke nwere ike ịbụ na mmiri na-enweghị nsogbu, ebe ọ na-anọgide dị ka a Ihe PVC
Ọ dị mma maka ụfọdụ ọrụ aka, ọ dịghị ọnụ ala iso ụmụaka arụ ọrụ. Ma ọ naghị adịgide adịgide n'oge
Daalụ nke ukwuu, ojiji nke ngwaahịa a emewo ka m doo anya nke ukwuu. Na obodo m, anyị enweghị ngwaahịa a, daalụ na m bi na Panama, eziokwu bụ na amaghị m ma ha rere ya, ejiri m poselin oyi rụọ ọrụ. Daalụ
Zaghachi Bellanira Meléndez
Isiokwu dị ukwuu, anyị na-atụ uche polymer ụrọ na PVA, polyvinyl alchohol nke bụ ikuku ihicha polima ụrọ, na anyị na-akwado ndị Korea ụrọ n'ihi na ha bụ nke ezigbo mma.
Echere m na ị nwere echiche dị egwu mgbe ị gwara ụzọ ị ga-esi mee ụrọ yiri nke a n'ụlọ na kemịkal na-adịghị ize ndụ na nke nwere polymer bụ gluu.
Ndewo, agụrụ m akwụkwọ ozi gị nke ọma, ị meghị ka o doo anya ruo etu o siri mee ya. Daalụ Ekele si Argentina
Otu esi eme ihe njide oriọna site na imegharị otu tuna.